Abaalmarinta Caddaaladda - Falal Argagix - Weear argagixiso oo ku lidii ah Xarunta iyo Xerada Wakiilka Gaarka ah ee Maraykanka gudaha Benghazi, Liibiya
Weear argagixiso oo ku lidii ah Xarunta iyo Xerada Wakiilka Gaarka ah ee Maraykanka gudaha Benghazi, Liibiya
Benghazi, Liibiya|Sibtambar 11-12, 2012
Sibtambar 11-12, 2012, afar Maraykan ah — Safiirka Maraykanka ee Liibiya John Christopher Stevens, Sarkaalka Maaraynta Adeegga Macluumaadka Dibedda Sean Smith, iyo Takhasusayaasha Ilaalinta Ammaanka Glen Anthony Doherty iyo Tyrone Snowden Woods — ayaa lagu dilay weerar argagixiso oo liddi ku ah Xarunta iyo Xerada Wakiilka Gaarka ah ee Maraykanka gudaha Benghazi, Liibiya. Taxanayaal weeraro argoosi, qoryaha darandooriga u-dhaca, garnaylo roketyo wadaan (RPGs), madaafiic ayaa lagu qaaday laba goobood Maraykanku ku leeyahay gudah Benghazi, iyo weliba shaqaale Maraykan ah oo kala socdaalayey labada goobood. Waxa dheer, waxa weerarka ku aad u dhaawacay laba shaqaale Maraykan ah, waxa ku dhaawacmay saddex shaqaalaha qandaraaslaha ilaalinta ee Liibiyanka, taas oo dhalisay buruburka iyo ka-tegista labada gooboodba.
Barnaamijka Abaalmarinta Caddaaladda waxaa lagu bixinayaan abaalmarin gaarayso illaa $10 milyan haddii la helo warbixin suuragelinaysa in caddaalad lagu qaado kuwii ka mas’uulka ka ahaa weerarkan.
Safiir John Christopher Stevens, 52, wuxu ku dhashay woqooyiga California oo uu mihnadiisa Arrimaha Dibedda ka bilaabay 1991. Safiir Stevens wuxu ka shaqeeyey meelo badan oo dibedda ah oo wuxu ahaa Ku-simaha Madaxa Wakiilka Liibiya laga bilaabo 2007 illaa 2009. Laga bilaabo Maarso 2011 illaa Noofembar 2011, Safiir Stevens wuxu ahaa Wakiilka Gaarka ah ee Golaha Kala-guurka Qaranka Liibiya, oo wuxu gaaray Tripoli gudaha Maajo isaga oo ah Safiirka Maraykan ee Liibiya. Kahor intaanu ku biirin Arrimaha Dibedda, Safiir Stevens ka ahaa looyar ganacsiga caalamiga magaalada Washington, DC, kahorna wuxu Ingiriisida bari jiray tabaruc ahaan Peace Corps gudaha Marooko laga bilaabo 1983 illaa 1985. Xoghayaha Arrimaha Dibedda Hillary Rodham Clinton ayaa u qirtay inuu Safiir Stevens ahaa “geesi iyo nin wanaagsan, diblomaat dhammaystirab, iyo geesi Maraykan ah.”
Sean Smith, 34, wuxu ku dhashay San Diego, California, oo wuxu galay Ciidamada Cirk gudaha 1995, isaga oo ku soo shaqeeyey takhasuse dayactirka raadiyaha dhulka iyo Saajin Ciidan. Smith wuxu ku biiray Arrimaha Dibedda 2002 ka Sarkaal Maamul Macluumaad, isaga oo ka soo shaqeeyey dhawr hawlood oo dibedda ah, ay ku jirto Baqdaad, Pretoria, Montreal, iyo Hague. Smith wuxu u socdaalay Benghazi, Libya, gudaha Sibtambar 2012 si uu u taageero maaraynta iyo wada-xiriirka Wakiilka Gaarka ah ee Maraykanka.
Glen Anthony Doherty, 42, wuxu ku dhashay Winchester, Massachusetts, oo waxa la qoray ciidamada badda (Navy SEAL) gudaha 1995, isaga oo ka soo shaqeeyey Ciraaq iyo Afganistaan labadaba muddadii uu mihnadan ku jiray. Kahor ku biiritaanka ciidamada badda, Doherty waxa kale oo ka soo shaqeeyey tababare ciyaarta sululuxada barafka, wuxu galay dugsiga duulimaadka, oo wuxu ahaa waayo-arag adeege xaalad degdeg iyo tababare duulimaad. In 2005, Doherty wuxu bilaabay inuu u shaqeeyo sharikad gaara oo ilaalisa ammaanka saraakiisha Maraykanka ah ee dibedaha jooga. Doherty wuxu u socdaalay Benghazi, Libya, gudaha Sibtambar 2012 si uuu ilaaliyo ammanka Wakiilka Gaarka ah ee Maraykanka.
Tyrone Snowden Woods, 41, wuxu ku dhashay Portland, Oregon, oo wuxu labaatan sannadood ka shaqeeyey ciidamada badda (Navy SEAL), isaga oo dhawr jeer ka shaqeeyey Soomaaliya, Ciraaq iyo Afqanistaan. Woods waxa kale oo uu ahaa kalkaaliye caafimaad sajilan iyo kaaliye xaald degdeg ah oo idman. Gudaha 2010, Woods wuxu bilaabay inuu ka shaqeeyo ilaalinta ammaanka saraakiisha Maraykanka ah ee dibedaha jooga taas oo uu ugu shaqaynayey qandaraasle ammaan oo madax-bannaan. Woods wuxu u socdaalay Benghazi, Libya, gudaha Sibtambar 2012 si uuu ilaaliyo ammanka Wakiilka Gaarka ah ee Maraykanka.